दयाहाङको होटलमा सुवासको मस्ती, कसलाई भो सास्ती ? « Mazzako Online
दयाहाङको होटलमा सुवासको मस्ती, कसलाई भो सास्ती ?
माघ २ गतेबाट सार्वजनिक प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र इच्छालाई लिएर कलाकार दयाहाङ राई निकै उत्साहित छन् । चलचित्रको आफ्नो भुमिका पृथक नभएपनि दर्शकले नोटिस गर्ने खालको भएको उनी सुनाउछन् । चलचित्र इच्छामा उनी होटल साहुजीको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । सहयोगी चरित्रलाई पनि कसरी धोका हुन सक्छ भन्ने कुरा उनको चरित्रको माध्यमबाट देखाउन खोजिएको उनले बताए । उनी आफुले निर्वाह गरेको पात्र रेगुलर किसिमको भएपनि साथीको इच्छा पुरा गर्न सहयोगी भुमिकामा प्रस्तुत भएको जानकारी गराउछन् ।
पछिल्लो समयमा निकै ब्यस्त बनेका दयाहाङ्ग इच्छाको होटल साहुजी चरित्रबाट निकै खुशी भएका रहेछन् । निर्देशक मुनाल घिमिरे र नाटक नै ब्याग्राउण्ड भएका सुवास थापासँग उनको पहिलो काम भएकाले पनि हुनसक्छ उनी चलचित्रलाई लिएर निकै आशावादी छन् । चलचित्रमा काम गर्दाको पारिवारीक वातावरणले पनि कामको आउटपुट राम्रो आएको उनी बताउछन् । दयाहाङ्ग र सुवासको बीचको कथानक भित्रको रस्साकस्सीको बीचमा नायिका शिखा शाहीलाई सास्ती भयो कि भएन ? भन्ने जिज्ञासामा दयाले भने- ‘त्यो हेर्न त हलमै जानुपर्ला ।’
चलचित्रमा विवाह करकापमा होईन स्वेच्छामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य रुपमा देखाउन खोजिएको छ । कमेडी लभ स्टोरी चलचित्र इच्छामा दयाहाङ्ग राई, सुवास थापा, दिपशिखा शाही, ओम प्रतिक, देशभक्त खनाल, श्याम राई, आकाश पल, आयुष्मा कार्की, रश्मी भट्ट लगायत कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् ।
चलचित्रमा गम्भिर बिष्टको नृत्य, रोशन श्रेष्ठको द्वन्द, प्रकास घिमिरेको लेखन रहेको यस चलचित्रमा रोम ओली, नविन श्रेष्ठ, प्रकास घिमिरे र लक्ष्मण पौडेलको लगानी रहेको छ । चलचित्रको सुटिङ्ग दाङ्ग, भैरहवा, काठमाण्डौं र धुलिखेलमा गरिएको हो ।